Zithelana ngodaka: UMphathiswa udiza ngamathenda oMnyango - Bayede News
Izinhlaka zezemidlalo zibonakala zingalandeli okubekwe uMnyango
Inhloso wukuhlelembela isikhundla seqembu. Uthe izinsolo uyoziphendula nxa lisombuluka
La masonto amabili abe ngalukhuni eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC) ngenxa yezinsolo kanjalo nobufakazi ngenkohlakalo ezinhlakeni ezahlukene zikaHulumeni. Iva ebelibukeka lijuqa le nhlangano wudaba oluthinta amathenda ahlangene nezinsiza ngokhuvethe. Lokhu kwenze abaholi bale nhlangano kusuka kuMengameli uRamaphosa bababaza umgolo nobugovu kwabanye enhlanganweni.
Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesinye lapho kubikwe khona umsanka. Nokho okunye osekuchuma yimibiko yabaholi abaphezulu abadiza ngezikhundla kanjalo nemisebenzi ethile kuHulumeni. ElaboHlanga linohla lwemiklamo kanye nabaholi abagila le mikhuba kusuka kubahlonishwa abahola iminyango kuze kube semakhanseleni koHulumeni bendawo.
Leli phephandaba selingaziqinisekisa izinsolo ezibheke kuMphathiswa Wezobuciko Namasiko Nemidlalo KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uHlengiwe Mavimbela. Lezi zinsolo ziphelezelwa umyalezo othunyelwe kwabanye babaholi beqembu bayelana nemiklamo (imisebenzi) eseMnyangweni awuphethe nayilapho ubebanxenxa ukuba bangasali kabafake nabo. Kuthiwa konke lokhu kuwukuhlelembela umkhankaso wobuholi beqembu elibusayo nayilapho kuzoqokwa ubuholi besifundazwe.
ElaboHlanga lixoxisane nabaholi abehlukene bezifunda abanye abadalule ukuthi la mathenda oMnyango oMhlonishwa uMavimbela asebahlukanise phakathi ngoba abanye bebengawafuni kodwa abanye bawamukela. Omunye umthombo okhulume naleli phephandaba nonxuse ukuthi nangengozi singalidaluli igama lakhe.
Umholi ohlala esigungwini esiphezulu saseFar North, okuyisifunda esihlanganisa uMkhanyakude, uMtubatuba, uMkhuze neJozini, ukhale kakhulu ngala mathenda.
“Kulesi sifunda sethu usesixove wasiqeda ngala mathenda. Abanye abaholi esavumelana nabo ukuthi asiwafuni ngoba uthenga ngawo ingqungquthela, abasazibambi izincingo zethu. Lokhu kwenze sabona ukuthi sebewathathile ngoba naye akasapheli emagatsheni alabo nobhala. Nokho akuyena yedwa owenza lo mkhuba kodwa akhona namanye amaqabane aphethe iminyango kaHulumeni asebenzisa yona ukuziphendlela amandla okukwazi ukulawula izifunda ezithile. Angithi njengoba zonke izifunda zilungiselela izingqungquthela, lokho kunikeza ithuba labo abazonqoba ukuthi babe nezwi lokuthi obani okumele bangene esigungwini esilawula isifundazwe. Yikho-ke uHlengiwe naye engazibekile phansi. Nokho siyashaqeka ukuthi usekwazi ukuthenga amaqabane ngamathenda ekubeni ehluleke wancama ukusilethela izinsiza zemidlalo esasizicele kuye silungiselela ukhetho lokuchibiyela. Wehluleka ukusinceda saze salekelelwa osomabhizinisi abazimele,” kusho omunye umholi wesifunda ocele ukungadalulwa nangengozi.
Omunye umthombo waseMalahleni Region, ehlanganisa iNewcastle, iDanhouser, i-Amajuba, i-Uitretcht eMadlangeni, uthumele kwelaboHlanga imiyalezo yoMhlonishwa uMavimbela lapho exoxa khona ngamathenda aseMnyangweni wakhe eminyaka emithathu. Kulo myalezo uyacacisa ukuthi kunohlu lwezinkampani asebezinikezile umsebenzi kodwa ucela onobhala bafake nezabo noma ezabantu ababaziyo ukuze nabo bahlomule.
Nanku umyalezo ohunyushiwe: “Nobhala ngenhla uhla lwabahlinzeka ngezinsizakalo abafake izicelo zomsebenzi eMnyangweni wethu ukuze benze umsebenzi wokuhlanza iminyaka emithathu. Uma kukhona ohlinzeka ngomsebenzi ongamncoma, ngiyacela. Ngiyaxolisa ukukubandakanya kuleli zinga iyaputshuka,” kusho umyalezo okuthiwa ubuthunyelwe nguMphathiswa.
Omunye umholi waseFar North nohlala esigungwini sokuphatha wazise elaboHlanga ukuthi kunensizwa yangakubo ehlomulile kodwa umsebenzi wayehlula ngenxa yobukhulu bawo.
“Lowo mfana ubeyikhansela eJozini kodwa sizwe sekuthiwa uthole ithenda ebalwa nalawa okuthiwa uHlengiwe uhambe ekhankasa ngawo. Sithole nokuthi umsebenzi umehlulile, wabe esewuyeka ngoba ubungaphezulu kwamandla enkampani yakhe,” kusho lo mholi. Khona lapho omunye umholi wakhona eFar North uthe kunonobhala wegatsha (alisho ngegama) naye ohlomulile kula mathenda, wathi useyabaleka nasemihlanganweni ngoba esaba ukuthi uzobuzwa ngawo.
Iphini likaSihlalo we-ANC wesifunda iMzala Nxumalo okuyiZululand, ehlanganisa Abaqulusi, uNongoma, Ulundi, iDumbe, uMnu uKhaya Khumalo umvikele uMphathiswa waze wavusa negama laloyo owayenguNdunakulu. Uthe akafuni nokwenziwa umthombo kodwa ufuna ukuzikhulumela ngalolu daba.
“Amanga aluhlaza lawa ashiwo ngoHlengiwe. Bayamsukela ngoba akathandi ngisho izikhundla lezi. UHlengiwe uyile nhlobo endala yoSenzo Mchunu esakholelwa ekutheni kube amagatsha akhulumayo hhayi ukuthi kube nguye ohamba efuna izikhundla. Mina ngikutshela kahle ngoba ngiyamazi futhi yonke imihlangano ethinta yena ngiyayazi ngakho akukho nje lapho osekukekwaxoxwa indaba yakhe. Uyabona nangesikhathi engena kuProvincial Executive Committee (PEC), wancengwa yithi ngoba sibona ukuthi bonke abangangaye sebephezulu ngakho naye akangasali. Ngisho le nto yokuba uMphathiswa wayenganandaba nayo kodwa samtshela ukuthi sifuna ukusebenzisana siyinhlangano kuHulumeni ngakho akavume. Lokhu osekushiwo amampunge aluhlaza cwe. Ngisho ematshwaleni asikaze nje siyikhulume indaba yakhe,” kuchaza uKhumalo.
Ilungu elihlala esigungwini saseMusa Dladla Region ehlanganisa iNkandla, uMthonjaneni, uMhlathuze, iNtambanana noMlalazi lithe uMtungwa ubehaya inkondlo enzela iphalishi.
“Hhawu wena ubungabuza uKhumalo. Phela umuntu wamathenda lowo futhi uwumngani wakhe uHlengiwe ngakho akukho abengakusho ngaphandle kokuphika,” kusho lo mholi.
Omunye umholi osondelene nalesi simo waseNkosi Bhambatha Region uthe uyaganga uMhlonishwa uMavimbela ngoba manje uphazamisa imikhankaso yamafolosi abo.
“Iyasithusa le nto yakhe ngoba sinohlelo oluqondile thina esisuka kulezi zifunda ezingenhla nesifundazwe. Sinamafolosi ethu okuhle la ukuthi uma enqoba, lokho kuzosho ukuthi isifundazwe ubuholi baso buma kanjani. Inhloso enkulu ukuba amafolosi afana noSipho Hlomuka wasoKhahlamba, uMdu Mhlongo waseMusa Dladla, uJomo Sibiya waseNkosi Bhambatha kunqobe bona kulezi zifunda nokuyokwenza sibe namandla okuthola unobhala noma nephini lakhe nosihlalo. Sikhathele ukuthi esigungwini esiphezulu sesifundazwe kuhlale kukhona iTheku neMoses Mabhida (eseMgungundlovu). Nokho uma iTheku elithatha uZandile Gumede bese uMthandeni Dlungwana ethatha iMoses Mabhida siyobe sesilimele kule nto esiyakhayo. Inhloso ukuba uma sekufika ingqungquthela uSihlalo uSihle Zikalala ahambe aye kuzwelonke bese uMdumiseni Ntuli egcinwa khona la,” kuchaza lo mholi ocele ukungadalulwa nangengozi.
Uthe namanje akaqondi ukuthi yini uMhlonishwa uMavimbela agagamele kangaka ngoba bekumele agxile ku-ANCWL ngoba ingqungquthela yakhona ingonyaka ozayo. Uqhubeke wathi: “Ngimkhonze kabi uHlengiwe kodwa lokhu asekwenza kuyangethusa. Manje usethi uSipho Hlomuka sizomshonisaphi uma yena esefuna lesi sikhundla sokuba iPhini Nobhala. Okokuqala ipolitiki imshaye wancama le ngakubo waze wakhishwa ngisho ekubeni uSomlomo kaMasipala uMkhanyakude. Ushayeke ngendlela yokuthi nendlala icishe yambulala, engasenalutho ngakho ukube nginguye bengizobekezela nje ngoba uyagagamela manje, “ kuchaza lo mholi.
Omunye umholi osesigungwini se-ANCWL KwaZulu-Natal uthe uyamangala ukuthi uNks uMavimbela angaqala imikhankaso yengqungquthela ezohlala ngowezi-2022, ekubeni eyabesifazane kuyiyo ezohlala kuqala ngonyaka ozayo.
“Uyabona kusha lokhu esikuzwayo ukuthi kukhona omunye wethu osehambe ethenga izithunywa ngamathenda. Asikwazi thina lokho ku-ANCWL. Empeleni asikwenzi nje ngoba inkinga esizoba nayo kuzovele kube nenkinga yokuthi sizithola sesiba nomuntu wesifazane ongekho ezingeni esilidingayo lobuholi ozovela esenikwa isikhundla ngoba nakhu enemali. Iyingozi kakhulu leyo ngakho iyasixaka impela,” kusho ilungu lesigungu esiphezulu ku-ANCWL.
Kumanje imikhankaso yokuhola isifundazwe kuthiwa ishisa phansi ezifundeni kodwa kwezinye inkinga sekungeyokuthi kuxatshenwe abaholi bebodwa abasabhekani.
Nayo indaba yamathenda kaNks uMavimbela kuthiwa isibuye yangeza kulokho kungezwani.
ELower South Coast, okuyisifunda esihlanganisa iPortshepstone, uMthwalume, iGamalakhe, iMargate, uMzumbe nezinye khona kuthiwa kuxatshenwe kodwa kubhekwe ukuthi amafolosi kaMnu uMzwandile Mkhwanazi athathe izintambo ukuze kuqhubeke ukwesekwa kukaMengameli uRamaphosa KwaZulu-Natal.
Isifunda iGeneral Gizenga Mpanza, okuyisifunda esihlanganisa iStanger neNdwedwe, sona kumincelwe ukuba kuthathe labo abeseka uMnu uMusa Zondi.
Abadeshi bazokhumbuza uMaimane indawo yakhe
EMoses Mabhida kuthiwa akungabazeki ukuthi uMnu uMthandeni Dlungwana uzozithatha izintambo benoMnu uSuper Zuma.
“Phela uMtha (uDlungwane) usewasebenzile amagatsha aseMoses Mabhida. Angithi uyibhubesi, wacasuka waze wasula naseSishayamthetho ngoba efuna ukuziphindiselela ngokuyovukuza amagatsha. Manje uyabona ukuthi usesebenzile akadlali yikho kucacela noma ubani ukuthi uzosithatha lesiya sifunda,’ kusho umthombo.
Okhulumela uMphathiswa uMavimbela, uNkk uPhathisa Mfuyo uthe lolu daba aluhlangene noMnyango kodwa uzocela ukuba kukhulunywe naye ngqo uNks uMavimbela.
“Okwamanje uNgqongqoshe usemhlanganweni kodwa uzothi uma eseqedile ngikwazise ukuze ukwazi ukuxoxa naye,” kusho uNkk uMfuyo.
UMphathiswa akathi vu okwamanje
Ngosuku olulandelayo uMphathiswa akandanga ngokuningi ngesikhathi esekhuluma nentatheli uthe uma imibuzo ikhuluma ngezinto zoMnyango ayixhumane noMedia Liason Officer.
Welulekiwe ukuthi udaba luqondene naye ngakho kufanele aziphendulele ngoba kuzoshicilelelwa uLwesihlanu.
“Uma ufuna ukukhuluma ngezinto ezithinta i-ANC ubongifonela ngoMsombuluko,” kusho uMphathiswa uMavimbela.
Uchazeliwe ukuthi kungaba kuhle aphawule ngoba udaba lwenzelwa leli sonto kodwa wathi “Hhawu kanti awuzwa yini ukuthi ngisemhlanganweni. Ngithe ngicela ungithinte ngoMsombukuko ngoba ngimatasa ngisemhlanganweni,” kuphetha uMphathiswa uMavimbela.
UMnu uMdu Dlamini wegatsha laseMkhuze okuthiwa kukhona omunye wabaholi okusolwa ukuthi usehlomulile, uthe amanga lawo futhi kumele abezindaba baqaphele ukuthi bangasetshenziswa ngoba kuningi osekuzoshiwo manje njengoba kuza izingqungquthela.
“Kuzomele niqaphele ngolwazi eseninikezwa lona manje. Uyabona nje kuleli gatsha lami akekho onethenda futhi naye uHlengiwe akanalo igunya lokukhipha amathenda. Kunalokho kungaba izikhulu zoMnyango wakhe okungathiwa zenzenjalo. Uyabona nje uNobhala wegatsha lami akanamali. Kade sizihambele naye siyogembula eHollywood Bet ngoba sizitshela ukuthi iKaizer Chiefs izonqoba. Ngakho naye akanayo ithenda nami anginayo. Abantu abasho lokho bangcolisa igama loMphathiswa ngento engekho,” kusho uDlamini.
nguCelani Sikhakhane Aug 14, 2020